पोर्नाेग्राफीको लत कसरी लाग्छ ? यसका हानि के–के हुन् ? यो लतबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ ?
जिज्ञासा : पी.
विभिन्न परिस्थितिबाट उम्केर, बचेर पोर्नोग्राफी एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुनाले पोर्नोग्राफीको सर्च गर्नेमध्ये केवल एक प्रतिशतमा मात्र यसको लत लाग्ने सम्भावना हुन्छ। यो लागुपदार्थको अम्मल वा दुव्र्यसनजस्तो हानिकारक हुँदैन। यसो हेर्दा पोर्नाेग्राफीको लत अविवाहित मात्रको समस्या हुनुपर्ने हो तर रमाइलो कुरा के छ भने यसको लत लागेकामध्ये करिब ३८ प्रतिशत त विवाहित नै हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
सामाजिक परिवेश वा धार्मिक मूल्य–मान्यताअनुरूप विभिन्न देशमा पोर्नोग्राफीलाई फरक–फरक तरिकाले लिने गरिएको छ। मुस्लिम राष्ट्रहरू यसप्रति कठोर छन्। तर, यिनै राष्ट्रमा लुकीछिपी यौन सामग्री बढ्ता खोज्ने गरिन्छ। शैक्षिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, समुदाय विशेषका कारण पोर्नोग्राफी हेर्ने बानीमा खासै भिन्नता छैन।
विसं २०४० को दशकमा टेलिभिजन तथा भिडियोको उपलब्धतासँगै यौनको मामिलामा बन्द समाजमा हुर्केबढेका नेपालीको यौन सामग्री (विशेषतः नीलो फिल्म) मा पहुँच हुन थाल्यो। पछिल्ला केही वर्षदेखि ग्याजेट, ल्यापटप, ट्याब्लेटका साथै इन्टरनेटको सहज पहुँचसँगै हातहातमै यौन सामग्री उपलब्ध हुन थालेका छन्।
यौनको मामिलामा कति सीमासम्म सामान्य वा कुन सीमारेखापछि लत (खराब बानी) हो भन्ने विवाद धेरै छन्। यो बहसयोग्य विषय हो। यौनिक दृष्टिले सञ्चारमाध्यमका विभिन्न साधनमार्पmत यौन उत्तेजना बढाउने गरी गरिएको प्रस्तुतिलाई पोर्नोग्राफीको रूपमा लिइन्छ। यस क्रममा छापा, मूर्तिकला, चित्र, बुट्टा, फोटो, फिल्ममार्पmत यौनिक हाउभाउ तथा मानव शरीर (आंशिक वा पूर्ण नग्न) प्रस्तुत गरिन्छ।
यौन आनन्द प्राप्त गर्ने विभिन्न इन्द्रियगत माध्यममध्ये स्पर्श (घर्षण) पछि सायद दृश्यले बढ्ता भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसैले होला, मानिस अर्काको (सामान्यतया विपरीतलिंगीको) नांगो शरीर हेर्न, लुकीछिपी नै भए पनि नुहाइरहेको दृश्य हेर्न तथा यौन क्रियाकलापलगायत हाउभाउ हेर्न लालायित हुने गरेको छ। तुलनात्मक रूपमा पुरुषले यस्तो व्यवहार बढी गरेको जस्तो लागे पनि मौका मिलेको खण्डमा महिला पनि पछि पर्दैनन्।
कुन सामग्रीलाई अश्लील मान्ने र कतिसम्मलाई श्लील मान्ने भन्ने विषय सदा विवादास्पद रहँदै आएको छ। नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशमा मन्दिर, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरचनामा यौनिक क्रियाकलापका दृश्यहरू अंकित गरेको विषयलाई कसरी लिने ?
पोर्नोग्राफीले यौन स्वास्थ्यमा फाइदा र घाटा दुवै पु¥याउने बताइन्छ। यौन आनन्द प्राप्त गर्ने एउटा सशक्त विकल्प पोर्नोग्राफीले यौन उत्तेजना जगाउन मद्दत गर्न सक्छ। धेरैजसोले पोर्नोग्राफी उपयोग गरेलगत्तै हस्तमैथुन गरी आफ्नो यौन भोक शान्त पारे पनि यसको खराब लतले उत्पन्न यौन तनावको स्वस्थ व्यवस्थापन भएन भने यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार र यौन हिंसाका घटना हुन पनि बेर लाग्दैन। अन्य विकल्पको दाँजोमा पोर्नोग्राफीले नकारात्मक असर नै पु¥याउँछ। विभिन्न अध्ययनअनुसार धेरैजसो यौन अपराधीले सानैदेखि वा बढ्ता पोर्नोग्राफी हेर्ने गरेको पाइएको छ।
पछिल्लो समयमा अन्य यौनसम्बन्धी खराब लतभन्दा पोर्नोग्राफीको लत छुटाउन तुलनात्मक रूपमा गाह्रो हुने गरेको पाइएको छ। पोर्नोग्राफीकै कारण व्यक्ति विशेषले आफ्नो यौनांगको आकार, यौन क्षमता, यौन साथीको सहयोग (विविध आसनलगायत गतिविधिमा)मा खोट लगाउने गरेको पाइयो।
पोर्नोग्राफी शत प्रतिशत नै हानिकारक छ भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ यस्तो यौन सामग्रीको उपयोग गर्नु गम्भीर गल्ती होइन। यसलाई अपराधसरह त कदापि मान्नु हुँदैन। दम्पतीबीच विभिन्न कारणले यौन चाहनाको कमी छ, पुरुष पार्टनरमा लिंग उत्तेजनामा समस्या छ, कति आसनको जानकारी छैन भने त्यस्तो परिस्थितिमा पोर्नोग्राफीको उपयोग सहायकसिद्ध हुन सक्छ। त्यसै गरी, निःसन्तान दम्पतीमा स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाका वीर्य संकलन कोठामा पनि यस्तै पोर्नोग्राफीका सामग्री राखिएका हुन्छन्। यसरी स्वस्थ तरिकाले पोर्नोको उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। हस्तमैथुनको बानीमा जस्तै पोर्नोग्राफीको उपयोगमा यसलाई खराब लतकै रूपमा विकसित हुन नदिन आत्मनियन्त्रण जरुरी छ। र, पोर्नोको खराब लत बसेको खण्डमा बिनाहिचकिचाहट यौन परामर्श लिन ढिला गर्नु हुँदैन।
पोर्नोको लत घटाउने कतिपय उपाय छन्। घरमा एकान्त वातावरणको स्थिति आएमा घुमफिर गर्न निस्कने वा बार्दली वा छतमा गई लेखपढ गर्न सकिन्छ। नेटजडित कम्प्युटर परिवारका सदस्यहरू ओहोरदोहोर गरिराख्ने ठाउँमा राख्ने गर्नुपर्छ। बेलाबेलामा छोराछोरीको अथवा छोराछोरीले अभिभावकको मोबाइल क्रसचेक गर्नुपर्छ। यो मामिलामा फोन लक गर्ने बानीप्रति सजगता अपनाउनुपर्छ। आफ्ना वयस्क हुँदै गरेका छोराछोरीलाई मोबाइल दिइएको छ वा नेट जडान गरिएको छ भने बेलुका निश्चित समयमा अभिभावकले नेट लाइन अफ गरिदिने नियम बनाउनुपर्छ।
पोर्नो धेरै हेर्ने बानी परेकाले आफूमा पोर्नो हेर्ने सोच आउनेबित्तिकै हस्तमैथुन गरेमा पोर्नो हेर्ने बानी र तत्क्षण पोर्नो हेर्ने अवधिमा कमी आउने कुरा कतिपय अध्ययनले देखाएका छन्। आफ्ना छोराछोरीले पोर्नोग्राफी हेरिरहेको समयमा अभिभावकले फेला पारे गालीगलौज गर्नुभन्दा सम्झाउनु बुद्धिमानी हुन्छ।
एचआईभी संक्रमितको यौन व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ ?
१३ मङि्सर २०७६
मधुमेहले यौन जीवनमा कत्तिको असर पुर्‍याउँछ ?
हतारमा कन्डम प्रयोग गर्दा के जोखिम हुन्छ ?
२२ कार्तिक २०७६